Sivavanye i-LG Optimus 3D (II) | I-Androidsis
el_uliulius | | LG, Reviews, Tutorials
Emva kwe icandelo lokuqala Apho sithethe khona kuphela malunga nomzimba wendlela yesiphelo, izixhobo zekhompyutha, izixhobo kunye nokugqiba, siza kuthetha lo wesibini uvela kwisoftware. Into eyizisayo kunye nento esinokonwabela kuyo kunye nenkqubo ye-3D ebandakanyayo.
Okokuqala, i Uhlobo lwe-android. Okwangoku kufuneka uhlawule Ifowuni ye-Android Froyo 2.2.2. Kubonakala kum lelinye lawona manqaku mabi kwisiphelo sendlela. Ngawo onke amandla ezinto anazo, kufanelekile ukuba ihlaziywe ngaphandle kwebhokisi kwiGingerbread. Isiphelo sendlela endisesandleni sam asindivumeli ukuba ndihlaziye. Ithi kukho impazamo kwiseva kwaye ayiqinisekisi nokuba kukho uhlaziyo. Ngenxa ye-LG ndiyathemba ukuba sisiphelo sam.
Inguqulelo ye Isiqalisi se-LG Optimus Ukuhamba kwiimenyu zi ngokufanayo apho sinokufumana khona kwifayile ye- I-Optimus emnyama okanye i-Optimus 2X. Akubonakali ngathi yimpumelelo kum, kuba ilula kakhulu. Ukuthelekisa esi siphelo (uluhlu oluphezulu lwe-LG) kunye neeterminal ze-Galaxy S2, i-EVO 3D okanye iSensation, kulindeleke ukuba amandla emizobo asetyenziswe ngakumbi hayi kwimidlalo kuphela. Ibe oopopayi abathile, kunye namawijethi ahlukeneyo ongakhetha kuzo, esele inesiqhelo kubo bonke abavelisi bemozulu- yewotshi. Kwelinye icala lokulula, kufuneka akukho lag ivela, itheminali ecothayo ayiqapheleki, kwaye sinokuba nezicelo ezithile "ezinzima" ezisebenzisa isandla sesibini ngaphandle kwefowuni eya kwiipedali.
Njengazo zonke iifowuni namhlanje, inayo izicelo zakho ze-imeyile okanye uthungelwano lwasentlalweni. Ngentlalontle + sinokuba nazo zonke iinethiwekhi zentlalo ezihlanganisiweyo kwaye siyazi yonke into ephekiweyo kwiiprofayili zethu ze-2.0. Inayo ifayile ye- SmartShare Ukuze ukwazi ukwabelana ngomxholo phakathi kwezixhobo ze-LG ezihambelanayo. Iza kunye nokusetyenziswa okuhambelana nemozulu okanye iindaba ezenziwe ngokwezifiso ze-LG. Uphoswa sisicelo esenzelwe i-Twitter okanye i-Facebook kwaye musa ukutsala ezisemthethweni kule fowuni.
Ewe sinayo yonke into oyifunayo ukonwabela amandla emultimedia yesiphelo. Abaphulaphuli ngekhwalithi elungileyo kakhulu eya kukwenza ukonwabele umculo owuthandayo. Kwimeko yokungabi nawo umculo owuthandayo ungahlala uhleli sebenzisa unomathotholo Kukuzisa ukuba umamele amaza e-FM kwaye ufumane isikhululo osithandayo.
Ewe, ndiyigcinile eyona nto ilungileyo kwinxalenye yokugqibela yeli nqaku, 3D. Asinanto enye yokuqalisa i-terminal, kwidesktop, ukufikelela ngokuthe ngqo kwifayile ye 3D isithuba ukusuka kwisiphelo sendlela. Umthumeli uvulelwe kuthi esele ikwi-3D. Kuyanceda ukuqhela iliso kwinqanaba lesithathu, ngamanye amaxesha elinzima. Uyajikeleza kwaye uyonwabele imbonakalo ye-3D yokukhetha phakathi Ukusetyenziswa kwe-3D kunye nemidlalo, isikhokelo se-3D, i-3D YouTube, igalari ye-3D okanye ikhamera ye-3D. Ukuthi, ukuba intetho inokuvunyelwa, kukudlula. Ukuba uqala encinci, uyabona Iividiyo zeYouTube kwi3D, ikuhambisa kwakhona kwisitishi se-3D kwindawo yevidiyo, kwaye ungonwabela iividiyo zezilwanyana (ndiyazicebisa kakhulu), imihlaba, iinqwelwana, udliwanondlebe ... Emva koko unokufuna ukuthatha umzuzwana kwaye vavanya ikhamera kwi-3D ukurekhoda imiboniso okanye ukuthatha ezinye zezona zihlandlo zakho ozithandayo. Emva kwexesha, ukuba usenamandla ebhetri, mhlawumbi ungadlala umdlalo othile we-3D kwabo beza kufakelwa kwangaphambili, I-Asphalt 6 3D okanye i-Lets Golf 3D. Emva kobukhulu besithathu, ukuba ibhetri ihlala ixesha elide, kwaye awunaso isiyezi, unokuqhubeka nokonwabela oko.
Ekugqibeleni, Thetha kwakhona malunga nebhetri. Ngokwenene: "Uyasela". Isixhobo esine-hardware esincinci kangako sibonisa. Kuya kukubiza ukufikelela esiphelweni sosuku ngebhetri encinci ukuze ukwazi ukufunda ii-imeyile.
Masishiye ukusebenza kwenxalenye yesithathu kunye nento esinokuyikhupha kwisiphelo. Siza kuzama umdlalo kwi-3D ukubona indlela esebenza ngayo ifowuni kwaye ukuba siyakwazi ukuyonwabela ngaphandle kokufumana isiyezi.
Ndikushiya ividiyo kwabo banokuyibona kwi-3D.
Kwaye inguqulelo ye-3D ilapha
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » Sivavanye i-LG Optimus 3D (II)
Njengeemvavanyo ze-3D, i-Galaxy S2 yam iyangcangcazela, kodwa ibambelele kwiminqweno emithathu endiyigcwalisayo nge-3DS.
Ngapha koko, uninzi lwehypes ene-3D kwaye ngokwenyani aluphumelelanga; Ngokombono wam, into ephunyeziweyo ngumbono onamacala amathathu kubunzulu, ngobunzulu ndiyathetha ukuba i-3D iyaqapheleka kwiscreen «ngaphakathi», ngokungathi indawo yescreen inyukile (into efana neTARDIS ye Ugqirha Ngubani xD). Andikayiboni nantoni na evakalelwa ngokwenyani ephuma kwiscreen. Isalungile kakhulu, yinto eyahlukileyo kunesiqhelo.
Impazamo yeseva xa ifuna uhlaziyo, inikwa yiyo yonke i-lg3d, jonga kwi-htcmanía kwaye uya kuyibona ukuba injalo. Iintloni, kuba ngeGingerbread ungafumana ijusi enkulu
Hayi Ngaba kuphunyezwe kakuhle ??? Kubonakala kumangalisa kum, inyani yokuba i-3d kuphela kubunzulu buxoki, kuxhomekeke ekubeni uyazi ukuba ungayirekhoda njani ukuze iphume kwiscreen, ilula, kukho abantu abazinikezele ukurekhoda izinto eziza kuvela kwiscreen, sele kukho igqala elincinci le-3d ukuyibona kakuhle ndithatha iifoto onokuzibona ukuba ziphume njani i-3 4 cm ibaxiwe njengoko benditshilo kakade kwimenyu ye-3d ngokwayo enye yezicelo sele I-3d ngaphandle kwaye ungayithengi nge-crappy 3d ye-3ds Nceda ndikwanayo, yiyo loo nto ndisithi impilo2.
Ndine lg optimus 3d kunye nomntakwethu i-galaxy s2 kwaye i-lg iphezulu hahaha ojonga u-eske odidayo akanalo nofifi kuba ayiyonyani kwi-intanethi i-lg iyakhawuleza iscreen endisithanda kakhulu ngakumbi imidlalo ikhwalithi yesandi ininzi kakhulu kunye nekhamera ukuba ukuba k kubi kunaleyo ye-galaxy 2 kodwa kungenjalo i-lg ibhetele kakhulu iiplastikhi ezimbi ze-samnsung ziyinkunkuma lg ibhetele kakhulu kwaye nangaphandle kohlaziyo lwe-2.3 kunalapho Phuma puffff kuyakuthatha uncedo oluninzi ngaphezulu komnyele ...
Molo, molo emva kwemini, ndingathanda ukwazi ukuba ndifumana phi okanye kwesiphi isicelo i-lg optimus 3d radio (lg-p920)
Okwangoku andinakukufumana kwaye ukuba kukho umntu owaziyo ukuba uphi na nceda ndiyayixabisa
Phendula ku Saenz620
Irediyo ye-fm ayikho kule fowuni.
molo ndine-lg optumus 3d into eyothusayo kukuba kwiimpawu ikhankanya unomathotholo njengesicelo kodwa enyanisweni ayinaso eso sicelo umntu owaziyo ngephepha ukuze alilayishe
IFIFA 12, ekhethekileyo i-Android
IGingerMaster: Eyona nto inobungozi kwiTrojan ye-Android, ngokwePhando